အတတ်ပညာ China Linear atc cnc router စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
သစ်သားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့်ဌာနသည် မြင့်မားသောစံချိန်စံညွှန်းများ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သော အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် အဆင့်မြင့်ဖောက်သည်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး၊ အစိုင်အခဲသစ်သား၊ သိပ်သည်းဆဘုတ်၊ ပေါင်းစပ်ဘုတ်၊ မာကျောသော ပလပ်စတစ်၊ စကျင်ကျောက်အတု၊ acrylic နှင့် အခြားပစ္စည်းများ အစုလိုက်အပြုံလိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။
1. Structure တည်ငြိမ်မှု- သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကို တုန်ခါမှု (tempering) အိုမင်းရင့်ရော်မှုဖြင့် ကုသပေးပြီး ရေရှည်အသုံးပြုပြီးနောက် ပုံပျက်သွားခြင်းမရှိပါ။
2. ကောင်းမွန်သော တည်ငြိမ်သော အရည်အသွေး၊ ကောင်းမွန်သော ထိန်းသိမ်းမှုဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် စက်မှုထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ Taiwan Syntec သည် Multi-layer 3D လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးစီးမှု၊ မြန်ဆန်ချောမွေ့သော 3D လုပ်ဆောင်မှု၊ ထွင်းထုခြင်းနှင့် ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
3. အီတလီနိုင်ငံမှ တင်သွင်းသော HSD စွမ်းအားမြင့် လေအေးပေးစက် ဗိုင်းလိပ်တံ၊ တိကျသော၊ ဆူညံသံနိမ့်၊ မြန်နှုန်းမြင့်၊ ကြာရှည်စွာ၊ ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှုကို အပြည့်အဝပေးစွမ်းရန် စက်၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန်။
4. အီတလီနိုင်ငံမှ တင်သွင်းလာသော မူရင်းလွှတူးဖော်သည့် တူးဖော်မှုပေါင်းစပ်ယန္တရားအတန်းတစ်ခုသည် တူးဖော်ခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ထွင်းထုခြင်း၊ ပတ္တာအပေါက်၊ သော့ပေါက်နှင့် တံခါးပြားများထုတ်လုပ်ခြင်း၏ အခြားသော ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်များကို တစ်ကြိမ်တည်း ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
5. Japan Yaskawa servo drive သည် လေးလံသော သစ်သားဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်း အမျိုးမျိုးအတွက် အစွမ်းထက်ပါသည်။
6. linear guide သည် လေးတန်းဝန်ကို ထမ်းနိုင်ပြီး ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်နိုင်ပြီး မြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည့် နှစ်တန်းနှင့် လေးတန်းပါရှိသော လေးတန်းမျဉ်းကြောင်းလမ်းညွှန်ကို လက်ခံပါသည်။
7. ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်းစနစ်သည် လိုအပ်သောကိရိယာများကို လိမ္မာပါးနပ်စွာ ဖလှယ်နိုင်သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့်နည်းပညာကို လက်ခံပါသည်။ကိရိယာ၏သိုလှောင်မှုပမာဏသည် 12-16 အပိုင်းအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။
8. နိုင်ငံတကာထိပ်တန်းလေဟာနယ်စားပွဲ၊ Bakelite စားပွဲသိပ်သည်းဆ၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ၊ မြင့်မားသောစုပ်ယူမှု၊ မတူညီသောပစ္စည်းများ၏ပြင်းထန်သောစုပ်ယူမှုရှိသောစားပွဲ၊ ဤစက်စားပွဲသည် suction plate အလိုအလျောက်ရုတ်သိမ်းသည့်ကိရိယာနှင့်အတူသစ်သားတံခါးသော့ခတ်အပေါက်နှင့်ပတ္တာ groove စီမံဆောင်ရွက်ရာတွင်ပိုမိုအဆင်ပြေသည်။
9.Good software compatibility- MasterCAM၊ Type3၊ UG၊ AutoCAD၊ ArtCAM၊ Proe၊ JDpaint စသည်ဖြင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ပန်နယ်ပရိဘောဂများ၊ စိတ်ကြိုက်ပရိဘောဂများ၊ ဗီရိုများ၊ ဗီရိုများ၊ ခေါင်းအုံးများ၊ ရှေးဟောင်းပရိဘောဂများနှင့် panel ပရိဘောဂအမျိုးအစားအားလုံးကို မျက်နှာပြင်ပန်းပွင့်ထွင်းခြင်းနှင့် သော့အပေါက်ဖွင့်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို တစ်ကြိမ်တည်း ပြီးစီးခြင်း။
အလှဆင် ပန်းချီကားများ၊ ဖန်သားပြင်များ၊ အလှဆင်ပုံစံများ၊ သုံးဖက်မြင် လှိုင်းဘုတ်များ၊ အသံစုပ်ယူသည့် ဘုတ်ပြား နှင့် အခြား အလှဆင် ထွင်းထုခြင်း လုပ်ငန်းများ။
3. စက်မှုသုံး စက်ကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ တစ်ပိုင်းကုန်ချော ထုတ်ကုန်ကို စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း-
စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး အပ်ချုပ်စက်များ၏ ကောင်တာများနှင့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၏ ကောင်တာမျက်နှာပြင်များကဲ့သို့သော တစ်ပိုင်းကုန်ချောထုတ်ကုန်များကို နက်ရှိုင်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း။
ဂစ်တာခေါင်းကို ပြုပြင်ခြင်း၊ တစ်ပိုင်းချော ဂစ်တာပြုပြင်ခြင်းနှင့် ဂီတတူရိယာများ၏ အလှဆင်ပုံစံအမျိုးမျိုးကို မျက်နှာပြင်ထွင်းထုခြင်းနှင့် သုံးဖက်မြင်အကွေးမျက်နှာပြင် ထုတ်လုပ်ခြင်း
သစ်သားမှို၊ ပျောက်မှိုမြှုပ်၊ အစားအသောက်မှို (ဥပမာ- လကိတ်မှို) နှင့် အခြားမှိုများကို တိကျစွာထုတ်လုပ်ခြင်း။
လက်မှုရုပ်ကြွများ၊ ရုပ်ရှင်ထွင်းထုခြင်း၊ လက်မှုဆွဲသီး၊ မော်တော်ကား အဆင်တန်ဆာများနှင့် အခြားအနုပညာနှင့် လက်မှုပညာများ ထွင်းထုထုတ်လုပ်ခြင်း။
အက်ခရီလစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ထွင်းထုခြင်း၊ acrylic blister ပုံစံပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပန်းပုနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ တံဆိပ်များနှင့် ဆိုင်းဘုတ်အမျိုးမျိုး။
အဆင့်မြင့် R8 CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အလုပ်ဧရိယာ (X*Y*Z) 1300MM*2500MM*200MM
ဗိုင်းလိပ်တံ 9kw GDZ ATC ဗိုင်းလိပ်တံ
Tool မဂ္ဂဇင်း ကိရိယာအာရုံခံကိရိယာပါသော 8 အနေအထား servo inline အလိုအလျောက်တူးလ်ပြောင်းလဲသူမဂ္ဂဇင်း
မော်တော် Shanlong 1300W ဆာဗာမော်တာ
ဒရိုက်ဘာ ရှမ်းလုံ servo မောင်း
Linear ရထားလမ်း X၊Y၊Z ဝင်ရိုးသည် 25 Hiwin Linear ရထားလမ်း၊ ဘေးတိုက်တွဲလောင်းဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံသည်။
Z ဝင်ရိုး Z ဝင်ရိုး TBI -2510 ဘောလုံးဝက်အူ
X၊Y ဝင်ရိုး X၊Y ဝင်ရိုး 1.5m helical ထိန်သိမ်း
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် Shanlong 3042 all in one ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
အစိုးရအဖွဲ့ ပါမောက္ခကြီးများ အစိုးရအဖွဲ့
လျှော့စားပါ။ Japan Shimpo လျော့ချဆေး
စက်စားပွဲ ဇုန်6ပါသော ဖုန်စုပ်စားပွဲ၊ 7.5kw/380 ပန့်
လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှာပါ။ ထောင့်မှန်အနေအထားလုပ်ဆောင်ချက် + အလိုအလျောက်တွန်းထုတ်သည့်ပစ္စည်း
စက်ကိုယ်ထည် လေးလံသော 3.5 စက်ကိုယ်ထည်၊ ထူထဲသော gantry ဖြင့် သတ္တုပြားဖွဲ့စည်းပုံကို တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။
အသားတင်အလေးချိန် 2800 ကီလိုဂရမ်
ယခင်- သစ်သားရောက်တာ atc
နောက်တစ်ခု: Atc ပရိဘောဂစက်
တရုတ်ကြော်ငြာ Mini Cnc Router ပေးသွင်းသူ
China Cnc Wood Router Table စက်ရုံ
Head Atc Cnc Router သုံးခု
Linear atc သစ်သား cnc router စက် Saw bl...